महाबिर पुन प्रधानमन्त्री भए पेट्रोलियम पदार्थमा नाफा सहितको जनतालाई राहत दिने योजना - चिसेफायू
धरान । युक्रेन रुसको युद्धको कारण देखाउदै अन्तर्राष्ट्रिय पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढेको भन्दै नेपाल आयल निगमले पनि नेपालमा मुल्य वृद्धि गरेको छ । यसरी जनताको अबिभावक सरकारले राहत दिन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महाबिर पुनले पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य समायोजन गर्दै आयल निगम नै नाफामा जाने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।
महाबिर पुनले आफ्नो सामाजिक संजाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै वर्तमान सरकारले आहात दिइरहेको बेला नाफा सहितको राहत दिने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । उनले `यदि म प्रधानमन्त्री भएको भए पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य यसरी मिलाउने थिएँ´ भनेर लेखेको छ । जसका लागि सरकारले लगाउने करहरु छुट दिएर जनता राहत दिन सकिने स्पष्ट खाका तयार पारेको छ।
महाबिर पुनको योजना :
यदि म प्रधानमन्त्री भएको भए पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य यसरी मिलाउने थिएँ –
पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लाग्ने सरकारी राजश्व र मुल्य अभिवृद्धी कर (मु.अ कर) मा प्रति लिटर ३० रुपैंया घटाएर प्रति लिटर पेट्रोलको मुल्य रु. १८५ र डिजेलको मुल्य रु. १७७ बनाउने थिएँ । यसो गर्दा आयल निगमलाइ पेट्रोलमा प्रति लिटर रु. २.४२ र डिजेलमा रु. १.०५ रुपैंया नाफा हुने थियो । अनि आयल निगम पनि डुब्ने थिएन । यसलाई नेपालीमा “सर्प पनि नमर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने” भन्छन । अनि अंग्रेजीमा Win Win Situation पनि भन्छन। कुरा बुझ्न तलको तालिका हेर्नु होला । राजश्व र मु.अ. कर बाहेक अरु मुल्य केहि बदलेको छैन ।
यस्तो प्राबधान अहिले संसारमा यदि म प्रधानमन्त्री भएको भए पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य यसरी मिलाउने थिएँ –
यस्तो प्राबधान अहिले संसारमा युक्रेन र रुसको लडाईले गर्दा भएको मुल्य बृद्धी नरोकिंदै सम्म लागु गरिनेछ। बिश्व बजारमा पेट्रोलियमको भाउ सामान्य नहुन्जेल सम्म यसरी नै मुल्य समायोजन गरिने छ । किन भने बिश्व बजारको मुल्य हामीले घटाउन सक्दैनौं । हामीले घटाउन सक्ने भनेको पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने राजश्व र कर मात्र हो । यसो गर्दा जनताले थोरै भए पनि राहत पाउँने छन् र नेपाल आयल निगम पनि डुब्ने छैन । माननीय सभासदज्यूहरु ले यो प्रस्ताबलाई बहुमतले पारित गर्नु होला । अनि जनताले सरकारको खोइरो खन्ने छैनन् अथवा खोइरो खने पनि अलि कम खन्ने छन् । धेरैले जयजयकार पनि गर्ने छन् । धन्यबाद